Mexin Umbala weSolar Powered Auto Ubumnyama Welding Helmet enezitikha zamathambo-LYG-L-Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co., Ltd.
Isigcina-ntloko sombane esimnyama
Ulapha : Ikhaya>imveliso>Isigcina-ntloko sombane esimnyama>I-LYG-L
Ipaki yeNdawo yeHugang, iXindian Idolophu iRudong, Jiangsu
Mexin Umbala weSolar Powered Auto Ubumnyama Welding Helmet enezitikha zamathambo
I-Crystal ye-Crystal esemgangathweni ophezulu, ukuqina kokukhanya, kunye nokukhuselwa kokukhusela i-ultraviolet kunye nemisebe ye-infrared yamkelwe ukukhusela i-welding opharetha ekulimaleni yimisebe yokulimala njengemisebe ye-ultraviolet, i-infrared rays .etc.
I-valve yokukhanya yecilasi yecrymid yamkela itekhnoloji entsha yokutshintsha ngokuzenzekelayo ukukhanya okulawulwa kukukhanya .multilayer LCD kunye neglasi edityanisiweyo imisa ngokupheleleyo iiarraviolet kunye nemisebe ye-infrared kwaye zikhanyise ukukhanya okubonakalayo ngokulula ukwenzela ukukhusela amehlo opharetha, kunye nokumenza abe jonga into ejijayo ngokucacileyo, oko kunciphisa ukuphindaphindwa kwe-weld, kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.
Uyilo loqobo lwetekhnoloji yokutshintsha oluzenzekelayo olusetyenziselwa ukulawula isekethe lwenza ukuba amagogo akwazi ukutshintsha ukukhanya okuqinileyo ukuya kukhanya mnyama. Ngenxa yoko, inokukhusela ukwakheka kwamehlo ethu kwenzakaliswe nge-arc ngequbuliso.
Uyilo lwantlandlolo lwe-Anti-nongenelelo lokunqanda luyathintela ukungayiboni kakuhle into yokugoba ngenxa yobume bendawo ekufutshane.
Iifilitha ezimbini ziphephe i-UV / IR eyingozi kunye nokukhanya okuqinileyo kwamehlo okulimaza kwimeko ye-ophthalmia yombane.
Iqokobhe le-PP likhusela ubuso bethu ekutshabalaliseni nakwizinto eziyingozi xa usonga i-weld, ukunciphisa amathuba okuba kwenzakala.
Ukuhamba komoya omtsha, osebenzayo ekunciphiseni ukukhutshwa kwegesi eyingozi kunye nothuli lwe-weld kunye nokunye ukonakala emzimbeni ukuthintela ukwenzeka kwe-pneumoconiosis emsebenzini.
Izinto zepolymer, amandla aphezulu, ukuvuza okukhanyayo kufanelekile kwimeko yangoku kunye neendlela ezahlukeneyo zokuguquguquka kwimeko ezahlukeneyo zomsebenzi.
1） isigcina-ntloko kunye nayo
2, Pakisha isigcina-ntloko ngengxowa yeplastiki I-3） Lala flat iibhokisi zemibala engama-20 ezantsi kwebhokisi 4） Faka imiyalelo engama-20 5） Beka ii-helmet ezingama-welding ezingama-20 kunye neebhloko entloko kwindawo yokupakisha 6） Ukupakisha: （I-725mm × 485mm × 430mm）
Ngokuphawula: Ukuncitshiswa kwevolumu kunye nokunyuka kwenani xa kuthelekiswa nokuPakisha enye (endala)
2） Paka isigcina-ntloko
3） Faka imiyalelo eli-16 kwibhokisi yokupakisha I-4） Faka ii-helmet zokuthambisa ezi-16 kunye neebhloko zentloko kwibhokisi yokupakisha
5, Ukupakisha: （540mm × 540mm × 310mm）
I-GW: 8Kg NW: 11Kg
Ukukhumbula: Le ndlela yokupakisha ayinayo ibhokisi yemibala.
1） Pakisha welding
Isigcina-ntloko ngengxowa yeplastiki
2） Faka imiyalelo kwi
3） Beka isigcina-ntloko sentsimbi kunye nebhegi yeplastiki kwibhokisi yombala ） Beka ii-hemithi zentsimbi ezi-4 ezipakishwe kakuhle kwipakeji yangaphandle 5） Ukupakisha: （I-740mm × 345mm × 490mm）
Sokumakishwa: Ukuncitshiswa kwevolumu kunye nokunyuka kwenani xa kuthelekiswa nokuPakisha ezintathu (ezindala)
I-copyright © Jiangsu Meixin Optoelectronics Technology Co, Ltd. Inkxaso kaMeeall